နှစ်၂၀၀ ကျော် သမိုင်းဝင် လင်းဇင်းကုန်း မြန်မာမွတ်စလင် သုဿာန် ဖျက်သိမ်းရန် အမိန်ထုတ်ထား - News @ M-Media
in Interview / မြန်မာမွတ်စ်လင်မ်သမိုင်း / မြန်မာသတင်း — July 12, 2012
ဇူလိုင် ၁၂ ရက် ၂၀၁၂
ဓါတ်ပုံနှင့် အင်တာဗျူး- သုတမောင်
မေး – လင်းဇင်းကုန်း ကဘာရ်စတာန်(သုဿာန်)ရော ဒါရ်ဂါဟ်နဲ့ရော ပတ်သက်ပြီးတော့ သိချင်တာလေးမေးချင်ပါတယ်။ ဦးလေးတို့အနေနဲ့ ပြောပြလုိ့ရမလား ခင်ဗျ။
ဖြေ – အဲဒါက ဘိုးတော်ဘုရား လက်ထက်ကတည်းက အာဗစ်ရှာဟိုစိုင်နီသခင်ကြီးက ဒီစကားဝါဥယျာဉ်ထဲမှာလာပြီးတော့ အမလ်ထိုင်(တရားထိုင်)နေတော့ ပုဏ္ဏားဝန်ကနေ စကားဝါဥယျာဉ်ကိုဝယ်ပြီး သခင့်ကိုလှူလိုက်တယ်။ အာဗစ်ရှာဟိုစိုင်နီသခင်က မိန့်တော်မူတယ် “ငါကွယ်လွန်ရင် ဒီစကားဝါပင်အောက်မှာ မြှုပ်နှံပေးပါ”ဆိုပြီးတော့။ ဒါကြောင့် သခင့်တပည့်ဖြစ်တဲ့ ပုဏ္ဏားဝန်မင်းကြီး ဒီစကားဝါမြေကိုဝယ်ပြီး သခင့်ကို ၀ကားဖ်(လှူဒါန်း)လုပ်တယ်။ ကျွန်တော်တို့ အစ္စလာမ်မှာ အခုလို သူတော်စင်များရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်အ၀န်းအ၀ိုင်းမှာ ၂၄-နာရီပတ်လုံး ကရုဏာတော် မပြတ်မစဲ ရွာသွန်းတယ်လို့ရှိတယ်လေ။ အဲဒီအကျိုးထူးရလိုတာကြောင့် သခင့်အနားတစ်ဝိုက်မှာ မြှုပ်နှံကြရင်း မွတ်စလင်မ်သင်္ချိုင်းဆိုပြီး ဖြစ်သွားတယ်။
ကိုပညာ(အမရပူရ)အမည်ခံ တောင်လေးလုံးကျောင်းတိုက် ဆရာတော်ဦးပညာဇောတ၏ “တောင်သမန်ဝန်းကျင် သမိုင်းဝင်နေရာများ” (နောက်ဆက်တွဲ) ပထမအကြိမ်၊ ရန်ကုန်မြို့၊ ဖေဖော်ဝါရီ-၁၉၉၆ (စာမျက်နှာ-၇၄-၇၅)တွင်ဖော်ပြချက်
နှစ်ပေါင်း (၂၀)အတွင်း အစ္စလာမ်ကျမ်းပေါင်း (၃၀)ရေးသားပြုစုခဲ့သည်။ မိုရီးဒ်တပည့်မတစ်ဦးဒ (မိုင်ယစ်တ်) အသုဘအခမ်းအနားတွင် လိုက်ပါပို့ဆောင်ရာ ယခုဒါရ်ဂါဟ် တည်ရှိသော ပတ်ဝန်းကျင်တွင် ဥယျာဉ်များစိုက်ပျိုးထားသည်ကို တွေ့ရှိလေသည်။ တစ်ခုသော စကားဝါဥယျာဉ်ထဲတွင် သခင်နေထိုင်နေတော်မူရာ၊ အေးဆေးငြိမ်းချမ်းလှသဖြင့် ‘ငါကွယ်လွန်လျှင် ဤနေရာတွင် (ဒဖွနာ)သဂြိုဟ်ခြင်းပြုရမည်’ဟု (၀စွီယတ်)မှာထားခြင် ပြုတော်မူ၏။
ပုဏ္ဏားဝန်မင်းက ထိုဥယျာဉ်မြေကို ၀ယ်ယူ၍ သခင့်နာမည်ဖြင့်လှူ၏။ ကွယ်လွန်သောအခါ ထိုနေရာ၌ မြှုပ်နှံသည်။ ဒါရ်ဂါဟ်၏အဓိပ္ပါယ်မှာ‘ကွန်းခိုရာ’ဟု အဓိပ္ပါယ်ရသည်။
“THE DARAGA DAW”
Arbhisha Hussaini’s tomb is commonly called the Daraga Daw. (Durgah is Persian meaningaroyal court; with an extended meaning in India it is used to meanashrine ofaMohammedian saint for prayer.) It is located on the north of Mezabin (Madhuca longifolia) avenue, west of “Red Pagoda” (Shwe Mutthaw Thein Hpaya), east of the wards called O-daw (Royal Potters) and Hmite Su (People engaed in reclaiming gold dust from the refuses collected from pagoda precincts and goldsmith’s workshop) and in the Lin Zin Gon cemetery.
“I wishawould be buried here”. Surely his wish was fulfilled andaDurgah was built in his memory at his tomb under the Zagawa tree that he had chosen.
ဒါရ်ဂါဟ်တော် အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့မှ အဖွဲ့ဝင်များအတွက် ထုတ်ဝေသည့် “ဘိုးတော်ဦးဝိုင်း(ဗဒုံမင်း)လက်ထက် အစ္စလာမ်သာသနာပိုင်ဆရာတော်ဘုရားဘွဲ့ရ ဟသွရတ်-စိုက်ယစ်ဒ်-ခါဂျာ-ဟာဖွစ်ဇ်-မို့ဟမ္မဒ် ရှရီးဖ် အာဗစ်ဒ်ရှာဟ် ဟို့စိုင်နီ အတ္ထုပ္ပတ္တိအကျဉ်း” စာအုပ် (စာမျက်နှာ ၃၄-၃၅-၃၆) မှ ကူးယူဖော်ပြပါသည်။
Tags: discrimination, mandalay, Tutamg